China Glass Noodle fanamboarana sy orinasa | Ruisheng
100% legioma mifangaro tsy misy rano / maina AD
Ahitra Barley maty maina
Paty veromanitra malasasily sy legioma masira
Vokatra STEVIOL GLYCOSIDES (SG) 90%
Slice tongolo gasy tsy ampy rano
Chive tsy ampy rano
Kodiarana Karoty tsy ampy rano
Ahoana no hihinanana?
Zava-misy momba ny sakafo
ANARANA PRODUKY & SARY:
Paty veromanitra / verinia
Vermicelli ovy mamy, fantatra ihany koa amin'ny veromika sy paty mamy, dia manam-pahaizana manokana nentim-paharazana efa 400 taona mahery. Ny veromanika ovy dia tsy ratsy rehefa avy nandrahoina nandritra ny fotoana ela. Manitra sy matsiro izy io, ary misy fomba fihinany isan-karazany. Izy io dia karazan-tsakafo iray namboarina tamin'ny fampiasana ovy mamy ho toy ny akora ary miankina amin'ny tsiranoka ao anaty ovy mamy. Manankarena amin'ny fibres sakafo, manankarena potasioma.
Sakafo mora mandeha tokoa ny Vermicelli Ovy. Izy io dia azo ampifanarahana amin'ny sakafo maro ary afaka mahandro amin'ny fomba maro samihafa hanamboarana lovia maro karazana miaraka amin'ny hena mangatsiaka sy mafana ary legioma, endasina sy haohana.
Zhengwen Brand Ovy Mamy, Vermicelli,100% akora masira ovy, mifanaraka tsara amin'ny rafitra fitantanana sy fifehezana HACCP. Sakafo lamaody miloko maitso, mahasalama, mora ary eo no ho eo amin'ny olona.
⒈. Ny vermicelli dia manankarena gliosida, fibre sakafo, proteinina, niacin, calcium, magnesium, iron, potassium, phosphore, sodium ary mineraly hafa;
⒉. Ny vermicelli dia misy tsiro tsara, afaka mandray ny tsiron'ny lasopy matsiro isan-karazany izy, ary ny verinia dia malefaka sy malefaka, izay mamelombelona sy mahafinaritra kokoa. Ny vermicelli maintso dia manana ny ankamaroan'ny asan'ny ovy mamy.
Izy io koa dia singa iray mahandro ny olona sinoa rehefa mihinana Hot Pot na ao an-trano na any amin'ny trano fisakafoanana, Masiaka, Vaovao, Manitra, Masiaka ary Solika fa tsy matavy. Sakafo Maitso & Fifanekena voajanahary ary azo omanina samy hafa ihany koa ho mora entina, afaka mankafy ireo sakafo matsiro na aiza na aiza tianao.
ASY FAHASALAM-BOLANA & ara-tsimika, FANOMPOANA MIKROBIOLOGIKA:
Mamandoana ≦ 14,0%
Isan'ny takelaka feno, CFU / g n = 5 ， c = 2 ， m = 104 ， M = 105
Endrika Coli, CFU / g n = 5 ， c = 2 ， m = 10 ， M = 102
Salmonella 25 / g Ratsy
Staphylococcus aureus, CFU / g Ratsy
Arsenika （amin'ny AS） ， mg / kg Ratsy
（Ny fetran'ny fikajiana ： 0.040mg / kg）
FAMONJENA & FAMONJENA:
1KG isaky ny Kitapo, 20 Kitapo isaky ny boaty
Famindrana kaontenera: 3.5 MT / 20GP FCL, 2.5 CBM; 7 MT / 40GP FCL, 5CBM
Ny marika amin'ny fonosana dia misy: Anaran'ny vokatra, kaody vokatra, Batch / Lot No., lanja mavesatra, lanja mavesatra, datin'ny mpamokatra, daty lany daty ary toetoetran'ny fitehirizana.
Tokony hasiana tombo-kase ary tahirizina eo amin'ny paeta, lavitra ny rindrina sy ny tany, eo ambanin'ny Toetrandro Madio, Maina, Mangatsiaka ary misy rivotra, Aza miala amin'ny maripana avo sy amin'ny taratry ny masoandro.
36 volana aorian'ny daty famokarana eo ambanin'ny fepetra fitahirizana voatondro. Daty famokarana: Voamarika eo ambanin'ny Cup.
Teo aloha: Vermicelli masira matsiro Chongqing
Manaraka: Noodle fitaratra ho an'ny supermarket
Fampidirana fohifohy momba ny veromanitra veromanitra / vera Instant
Vermicelli mofomamy mafana veromanitra, masiaka, vaovao, manitra, marikivy ary menaka fa tsy matavy! Sakafo maintso voajanahary izy io. Ny vovo-tany lehibe indrindra dia afangaro amin'ny ovy sy ny pea amin'ny habaka tsara indrindra, ary avy eo dia nataon'ny tantsaha manana asa-tanana nentim-paharazana. Spicy Hot Glass Noodle Vermicelli koa misy karazan-tsakafo mora ampiasaina.
Ny paty mamy sy marikivy dia avy amin'ny sakafon'ireo olona any Sichuan. Ny paty mamy sy marikivy dia vitan'ny olona teny an-toerana. Ny tsiro dia nomena anarana taorian'ny nanasongadinana ny tsiro marikivy sy masiaka ary avy eo lasa nalaza be fisakafoanana sy sakafo mahazatra.
Dingana telo hankafizana ireo sakafo matsiro
Sokafy ny sarony, ampio Vermicelli sy Seasoning (Afa-tsy ny vinaingitra) ao anaty Cup na Bowl;
Araraka ny rano mangotraka hatramin'ny tsipika fampidirana rano, sarony akaiky, ary apetaho mandritra ny 5 minitra;
Sokafy ny sarony, asio vinaingitra avy eo atsangano tsara ary ankafizo ny veromanitra mahafinaritra.
Ny fonosana vinaingitra dia asiana araka ny tsirony manokana
Isaky ny 100 (Gram)
Sanda momba ny sakafo mahavelona (NRV)%
1994 Miligrama （mg）
Paty mofomamy misy mofomamy misy moka
Paty mofomamy misy mofomamy misy mofomamy
Paty vera amin'ny kaopy Instant
Paty vera vita amin'ny legioma Instant
Nood vita amin'ny veromanitra mafana voa faran'izay haingana
Nood vita amin'ny veromanitra mafana, voankazo masira miaraka amin'ny tsiranoka saosy
Paty fitaratra eo no ho eo
Paty fitaratra eo noho eo ao anaty kitapo
Paty vera mafana avy hatrany
Paty veranina avy hatrany ao anaty kitapo
Paty veromanitra mafana voafafa avy hatrany ao anaty kitapo
Paty veromanitra mafana voa faran'izay haingana miaraka amin'ny tsiranoka saosy ao anaty kitapo
Paty paty Mala
Paty vera masiaka koreana
Paty fitaratra Koreana masiaka
Kaloria mofomamy misy ovy
Paty veromanitra mangidy legioma
Paty fitaratra misy legioma
100% voa voajanahary voajanahary / maina AD Celery
Tongolo maty rano
Korianera maty rano
Voaloboka Mala sy hena veromanitra
Ovy omena sakafo, L - Phenylalanine (PHE), Taurine, Vovoka karaoty maina, Karoty marobe, Vermicelli,